Mpanamboatra sy mpamatsy EPON OLT | China EPON OLT Factory
ZJ5610-EL dia cassette EPON OLT avo lenta sy avo lenta natao ho an'ny fidiran'ny mpandraharaha sy ny tambajotranà campus campus. Manaraka ny fenitra ara-teknika IEEE802.3 ah ary mahafeno ny fepetra takian'ny fitaovana EPON OLT an'ny YD / T 1945-2006 Fepetra takiana amin'ny tambajotra fidirana —— miorina amin'ny Ethernet Passive Optical Network (EPON) sy China telecom EPON fepetra teknika 3.0. Andian-tsarimihetsika ZJ5610-EL dia manana fisokafana tena tsara, fahaizana lehibe, fahamendrehana avo lenta, lozisialy feno, e ...
Fitarihan-kevitra 1. Fitaovana PON OLT karazana haingam-pandeha avo lenta ho an'ny mpitovo 2. Sehatra fanamiana an'ny 1G-EPON, 10G-EPON ary GPON 3. Toerana 10 PON, 160 1G-EPON na seranana 80 10G-EPON na seranana 160 GPON 4 Fiarovana ny rohy optika PON, fiarovana ny zana-kazo miaro ny lozisialy, fiarovana ny modely hery. Toetra mampiavaka 1. Standard: EPON mihaona amin'ny IEEE802.3-2008 Standard, GPON mihaona amin'ny ITU-T G.984 Standard. 2. Fahafahana lehibe: seranan-tsambo 160 1G-EPON na seranana 80 10G-EPON na seranan-tsambo 160 GPON. 3. Multi-ports: GE Comb ...
EPON OLT ZC6000 any ivelany
Fitarihan-kevitra 1. Fitaovana ivelany EPON OLT fitaovana any ivelany 2. Module 1550nm EDFA azo alaina modely 3. Seranan-tsambo 8 PON 4. Famolavolana kilasy indostrialy, maty voahidy tanteraka Al shell 5. Module herinaratra miampy toetra mampiavaka 1. Manara-penitra: mifanaraka amin'ny IEEE802.3- 2008 Standard. 2. Serivisy serivisy: lafiny serasera: seranana elektrika 2 GE ary seranan-tsambo optika 2 10GE, lafiny mpampiasa: seranan-tsambo 8 GEPON. 3. Fampandehanana EDFA: manome modules CATV EDFA azo ampidirina ary azo ovaina namboarina ny herinaratra optika. 4. Relia avo ...
Karazan-boaty karazana EPON OLT ZC1600
Fampidirana 1. Fitaovana EPON OLT efajoro boaty karazana boaty 2. Mety amin'ny fidirana amin'ny ambaratonga kely, azo ovaina amin'ny fametrahana 3. Seranan-tsambo 16 PON 4. Fiarovana rohy optika PON, modely misy herinaratra miampy toetra mampiavaka 1. fenitra: mifanaraka amin'ny IEEE802.3- 2008 Standard. 2. Fahafahana: seranan-tsambo 16 PON. 3. Port-multi: manome port GE (herinaratra sy optika) ary port optique 10GE amin'ny lafiny tambajotra. 4. Fahamendrehana avo lenta: fiarovana ny maoderina modules ny hery, redundancy modules ho an'ny mpiorina, proteina rohy optika PON ...